रुकुम पश्चिम – रुकुम पश्चिमकाे ग्रामीण भेगका महिलाहरूलाई लक्षित गरेर गाउँमै भिडियो एक्सरेमार्फत गर्भ जाँच गरिएको छ । सानीभेरी गाउँपालिकाको विभिन्न चार ठाउँमा एक सय ६ महिलाको गर्भ जाँच गरिएको हो । नियमित गर्भ जाँच गर्नबाट वञ्चित रहेका महिलाहरूलाई लक्षित गरेर गाउँमै सेवा दिइएको हो । ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड कार्यक्रम अन्तर्गत सानीभेरी गाउँपालिका १ को चाईनाबगरमा १५, गाउँपालिका २ को गिठाकोटमा २२, गाउँपालिका १० को अर्मामा २६ जना र गाउँपालिका ७ को छोटेबगरमा ४६ जनाको गर्भ जाँच गरिएको जिल्ला अस्पताल सल्ले रुकुमका ...
चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाले गर्भवती महिलाले गर्भ जाँच गराउँदा अण्डा उपलब्ध गराउने भएको छ । पालिकाभित्रको स्वास्थ्य संस्थामा गर्भ जाँच गराउन आउने गर्भवती महिलालाई अण्डा उपलब्ध गराइने भएको हो । गर्भवती महिलालाई नियमित स्वास्थ्य संस्थामा आई गर्भ जाँच गराउनका लागि प्रेरित गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष माया सिलवालले बताइन् । गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको उक्त कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजनसमेत गरिएको
चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाले गर्भवती महिलाले गर्भ जाँच गराउँदा अण्डा उपलब्ध गराउने भएको छ। पालिकाभित्रको स्वास्थ्य संस्थामा गर्भ जाँच गराउन आउने गर्भवती महिलालाई अण्डा उपलब्ध गराइने भएको हो।
मुग्लिन– चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाले गर्भवती महिलाले गर्भ जाँच गराउँदा अण्डा उपलब्ध गराउने भएको छ । पालिकाभित्रको स्वास्थ्य संस्थामा गर्भ जाँच गराउन आउने गर्भवती महिलालाई अण्डा उपलब्ध गराइने भएको हो । गर्भवती महिलालाई नियमित स्वास्थ्य संस्थामा आई गर्भ जाँच गराउनका लागि प्रेरित गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष माया सिलवालले बताएका छन् । […]
Khabarhub 8 दिन पहिले
गर्भवती महिलाको गाउँमै पुगेर गर्भ परिक्षण
सल्यान : जिल्लाको दार्मा गाउँपालिकाले गर्भवती महिलाको गाउँमै पुगेर गर्भ परिक्षण सेवा दिन थालेको छ।स्थानीय स्तरमै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न भन्दै गाउँपालिकाले चिकित्सक सहितको टोली गर्भवतीको गाउँमै पुगेर गर्भ परिक्षण अन्तरगत आल्ट्रसाउण्ड (भिडियो एक्सरे) सेवा दिएको हो।स्थानीय स्तरमै भिडियो एक्सरे सेवा सञ्चालनमा आएपछि गर्भवती महिलालाई चेकजाँच गराउन सहज भएको दार्मा गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख यज्ञ बस्नेतले जानकारी दिए। गर्भ परिक्षण गराउन शहर बजार जानु पर्ने बाध्यतालाई हटाउन गाउँमै गर्भ पर
कुटाइबाट गर्भ तुहिएपछि एक पक्राउ
सप्तरीको तिलाठी–कोइलाडी गाउँपालिका– ४ मा छिमेकीको कुटाइबाट स्थानीय २२ वर्षीया रञ्जुदेवी मण्डलको गर्भ तुहिएको घटनामा सम्लग्न भएको अभियोगमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रवक्ता डिएसपी माधवप्रसाद...
पीडित रञ्जुदेवी मण्डलको बिलौना गर्भ छ भन्दा पनि लात्ती र मुड्कीले पेटमा हाने पीडित रञ्जुदेवी (बायाँ) दुई नाबालक र सासुसहित न्याय खोज्न सदरमुकाम राजविराजमा ९ जेठको दिउँसो श्रीमान् बाख्रा चराउन जाँदा छिमेकी हरिहरले...
गर्भ रहेको ३५ वर्षसम्म महिलाको पेटमा ७ महिनाको बच्चा !
के तपाईंले कुनै महिलाले वर्षौँदेखि आफ्नो पेटमा बच्चाको भ्रूण पालेर राखिरहेको सुन्नुभएको छ ? गर्भ रहेको नौ महीनामा बच्चा जन्मिने मानव जातिमा ३५ वर्षदेखि पेटमा गर्भ बसिरहेको कुरा पत्याउन गाह्रो हुन्छ । तर अल्जेरियामा एकजना महिलाको पेटमा ३५ वर्षदेखि गर्भ बसिरहेको छ । समाचार अनुसार अल्जेरियामा एकजना ७३ वर्षीया महिलाको पेटमा अचानक भयंकर दुखाई महसुस […]
गर्भ खेर जाँदा अमेरिकी महिला जेल जानुपर्छ !
गर्भ खेर जाँदा हत्याको आरोपमा अमेरिकी महिलाहरू जेल पुग्ने गरेका छन् । गर्भ खेर गएकी ओक्लाहामाकी एक आदिवासी अमेरिकी महिलालाई मानवहत्याको आरोप लागेको थियो । उनलाई सो आरोप लाग्दा कैयौँ मानिसहरूमा आक्रोश पैदा भयो । तर अमेरिकामा यस्तो त्यस्तो अभियोग खेप्ने उनी मात्र एक्ली महिला भने होइनन्। सन् २०२० को ज्यानुअरीमा उनले अस्पतालमा आफ्नो बच्चा […]
गर्भ किन खेर जान्छ ? यस्ता छन् बच्ने उपायहरु
सामान्यतया गर्भ खेर जाने समस्याबाट आम महिलाहरु पीडित हुने गरेका छन् । नेपालमा पछिल्लो समय गर्भ तुहिने समस्या आम समस्या जस्तै बनेको छ । गर्भ खेर जानु एक जटिल समस्या हो ।